Sarkaal katirsan Xisbul Islaam oo Cod qarsoodi ah laga qabtay isagoo ku faraxsan qabsashadaii Dhoobleey dhiiri gelina u samaynaya Maleeshiyada Axmed Madoobe iyo ONLF.(dhagayso) | Halganka Online
Posted on Febraayo 19, 2010 by halganka
Sarkaal katirsan Ururka Xisbul Islaam ayaa fakiyay Sir u qarsooneed oo ay Mas’uliyiin katirsan Xisbul islaam ka lahaayeen dagaalada Jubbooyinka ee u dhexeeya Wilaayada Islaamiga Jubbooyinka iyo Maleeshiyaadka Shareeca diidka ah.
Madaxa Warfaafinta Ururka Xisbul Islaam Sheekh Maxamed Macalin ayaa shalay laga helay sir ah in uu kamid yahay Isbahaysiga Axmed Madoobe ee uu ku diinyahay Wilaayaadka islaamiga ee gobalada dalka ka hana qaaday.
Shalay Markii ay Maleeshiyaadkii ONLF iyo kuwii Axmed Madoobe dagaal ku galeen magaalada Dhoobley ayuu Maxamed Macalin Xariiro kala gedisan la sameeyay warbaahinta maxaliga ah ee Muqdisho wuxuuna sheeganayay dagaaladii Jubbooyinka isagoo is qarinaya.
Maxamed Macalin oo Farxad laga dareemayay ayaa yiri “Haa Annaga waaye Xisbul Islaam Jubbooyinka waaye, magacayga ha sheegina waxaad dhahdaan way sheegteen, shabaabka waan ku jebinay dagaalkii Jubbooyinka” maxamed Macalin.
Mid kamida Weriyaasha ku sugan magaalada Muqdisho ayaa si qarsoodi ah cod uga duubay Madaxa Warfaafinta Xisbul Islaam oo muujinayay nacayb xad dhaaf ah oo uu u qabo Wilaayaadka Shabaabul Mujaahidiin Jubbooyinka.
Codka Maxamed Macalin madaxa Warfaafinta Xisbul Islaam oo ku faraxsan wixii Dhoobley ka dhacay ayaa lagasii daayay Idaacad Islaami ah oo ku taal magaalada Kismaayo taas oo keeni karta in Saraakiisha Shabaabul Mujaahidiin ay Dacwad ku furaan Maxamed Macalin.
Arrinta layaabka leh ayaa aheyd markii Maxamed Macalin uu weriyihii uu lahadlayay ku yiri “dagaal in aan Muqdisho ka galno marabno ee maad naga daysaan,Jubbooyinka ayaan Shabaab ku wiiqi rabnaa” arrinkaas oo dareen dhalin kara.
Wararka qaar ayaa sheegaya in saraakiisha Wilaayada Jubbooyinka ay dhegaysteen Codka Maxamed Macalin islamarkaan ay sheegeen in ay waqtigeeda ka hadli doonaan.
Dad badan ayaa horay u tuhunsanaa iyo
Maxamed Macalin uu si firfircoon ula shaqeeyo Axmed Madoobe iyo ONLF basle weli Shabaab warka Maxamed Macalin Hadal cad kama dhihin.
« War Deg Deg ah: Ciidamada Shabaabul Mujaahidiin oo Jihooyin kala gedisan kasoo galay magaalada Dhoobleey iyo Gaadiid ay ka carareen Maleeshiyadii Axmed Madoobe oo laga heley Howdka Dhoobleey. Saalax Bad baado “kuwa Saaxibaday ah ee Baarlamanka ku haray waxaan leeyahay diinta islaamka soo gala meeshaas Islaamnimo mataal aniga hadda ayaan Muslim ahay”!. »